နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ နေ့ခင်းဘက်တွင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ညဘက်တွင် KTV မှာသွားကဲလို့ အင်းစိန်ထောင်တွင် တစ်ညအိပ်ခဲ့ရတဲ့ သံစဉ်မောင် – Cele Posts
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ နေ့ခင်းဘက်တွင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ညဘက်တွင် KTV မှာသွားကဲလို့ အင်းစိန်ထောင်တွင် တစ်ညအိပ်ခဲ့ရတဲ့ သံစဉ်မောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဘေဘီမောင်နဲ့ သံစဉ်မောင်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။စကားပြောကြမ်းတဲ့ အတွက် ပရိသတ်​တွေ ဩချရတဲ့ အထိပါပဲနော်။ နောက်ပိုင်းမှာ နေဒွေးနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းLive လွှင့်ငိုပြတာကြောင့် ပရိသတ်​တွေရဲ့ အချစ်တော် ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်နော်။
ဘေဘီမောင်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေး တွင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အခုချိန် မှာတော့ မြန်မာပြည် အေးချမ်းပါစေဆိုပြီး ဘုရား၊ တရားတွေ ဆက်တိုက် လုပ်နေပြန်ပါပြီနော်။ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက် ကလည်း သံစဉ်မောင်တစ်ယောက် နေ့ခင်းဘက်တွင် ဟန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး ညဘက်တွင် World Wide KTV မှာသွားကဲလို့ အင်းစိန်ထောင်တွင် တစ်ညအိပ်ခဲ့ရတာပါနော်။
အခုထိလည်း နေ့ဘက်တွင် ဘုရားတရား လုပ်ပြပြီး ညဘက်တွင် ရှိသမျှ Bar တွေထိုင်ပြီး မြူးတူးပျော်ပါး နေတာပါနော်။ နောက်ထပ်ကြားသိရတာ ကတော့ တခြားဘဲနဲ့အတူ နေတဲ့ အချိန်တွင် နေဒွေးက မြင်တွေ့သွားတာကြောင့် ရိုက်နှက်တာကို နှိပ်စက်ပါတယ်ဆိုပြီး ညီအစ်မနှစ်ယောက် မျက်ရည်ချူပြသွားကြ တာပါနော်။ သူတို့ ညီအစ်နှစ်ယောက်ကိုတော့ အကယ်ဒမီ တစ်ယောက်တစ်ဆုဆီ ပေးသင့်နေပြီနော်….
နှဦေးတျောလှနျရေးကာလမှာ နခေ့ငျးဘကျတှငျ ဟနျဆောငျဆန်ဒပွခဲ့ပွီး ညဘကျတှငျ KTV မှာသှားကဲလို့ အငျးစိနျထောငျတှငျ တဈညအိပျခဲ့ရတဲ့ သံစဉျမောငျ
ပရိသတျကွီးရေ ဘဘေီမောငျနဲ့ သံစဉျမောငျတို့ ညီအဈမနှဈယောကျ ကိုတော့ အားလုံးသိကွမယျ ထငျပါတယျနျော။စကားပွောကွမျးတဲ့ အတှကျ ပရိသတျ​တှေ ဩခရြတဲ့ အထိပါပဲနျော။ နောကျပိုငျးမှာ နဒှေေးနှိပျစကျခဲ့တဲ့ အကွောငျးLive လှငျ့ငိုပွတာကွောငျ့ ပရိသတျ​တှရေဲ့ အခဈြတျော ပွနျဖွဈလာပါတယျနျော။
ဘဘေီမောငျတို့ ညီအဈမနှဈယောကျ ဟာ နှဦေးတျောလှနျရေး တှငျ ဟနျဆောငျဆန်ဒပွခဲ့ပွီး အခုခြိနျ မှာတော့ မွနျမာပွညျ အေးခမျြးပါစဆေိုပွီး ဘုရား၊ တရားတှေ ဆကျတိုကျ လုပျနပွေနျပါပွီနျော။ ဖဖေျောဝါရီလကုနျပိုငျးလောကျ ကလညျး သံစဉျမောငျတဈယောကျ နခေ့ငျးဘကျတှငျ ဟနျဆောငျဆန်ဒပွခဲ့ပွီး ညဘကျတှငျ World Wide KTV မှာသှားကဲလို့ အငျးစိနျထောငျတှငျ တဈညအိပျခဲ့ရတာပါနျော။
အခုထိလညျး နဘေ့ကျတှငျ ဘုရားတရား လုပျပွပွီး ညဘကျတှငျ ရှိသမြှ Bar တှထေိုငျပွီး မွူးတူးပြျောပါး နတောပါနျော။ နောကျထပျကွားသိရတာ ကတော့ တခွားဘဲနဲ့အတူ နတေဲ့ အခြိနျတှငျ နဒှေေးက မွငျတှသှေ့ားတာကွောငျ့ ရိုကျနှကျတာကို နှိပျစကျပါတယျဆိုပွီး ညီအဈမနှဈယောကျ မကျြရညျခြူပွသှားကွ တာပါနျော။ သူတို့ ညီအဈနှဈယောကျကိုတော့ အကယျဒမီ တဈယောကျတဈဆုဆီ ပေးသငျ့နပွေီနျော….
ကျုံပျော်ကရွာလေးမှာ အလှူလုပ်ရင်း ဦးဇင်းတွေ ကိုရင်တွေကိုပါ ဝတ္တုငွေကပ်ကာ ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
တပ်မတော်ကြီးပြိုကွဲသွားအောင်မလုပ်သင့်ကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်တဲ့ မင်းအုပ်စိုး